राजेश हमाल : जात, इसाई लगानी र अभिनेता – Sudarshan Khabar
राजेश हमाल : जात, इसाई लगानी र अभिनेता
☸️ भीम उपाध्याय
राजेश हमालको एक पेशेवर अभिनेता हुन्। उनी कायर्क्रम प्रस्तोता पनि हुने गर्छन्, मोडेलिङ पर्ने गर्छन्। यी सबै उनको पेशा हो, जिविकार्जनको मेसो हो। सबैले गरेरै खाने हो। उनले पनि अरूले जसरी आफ्नो काम गरेर खाएका छन्।
हामीले पैसा तिरेर मनोरंजन बदलामा पाएका छौँ। उनको अभिनय लाखौँलाई मन पर्छ। जनताले उनको कार्यक्रम हेरेर मान सम्मान दिएका छन्। हाम्रो नाता एक कलाकार र दर्शकको मात्र हो। उनको जिवन समाज सेवा, समाज परिवर्तनका अभियान वा अन्य समाज परिवर्तनमा आफै लागेका पाटाहरू केही छन् कि छैनन् त्यो चर्चामा त्यति आएको देखिदैन।
अहिले विवादास्पद चर्चा उनबाट प्रस्तुत गराईएको जातको प्रश्न टिभी कार्यक्रम बन्न पुगेको छ। उनले त्यसमा काम गरेका हुन्, करार गरेर पैसा लिएका हुन्, अभिनय गरेका छन् र त्यो अभिनयले मनोरंजन पनि दिएको होला।
रामायणमा सिताको भूमिका खेल्ने अभिनेत्रीलाई कतै कुनै पार्टीमा लगाएको भड्किलो देखिने लुगामा देखेर उनलाई सिता माता ठान्नेहरूले नै खेदो गरेका थिए। अभिनय भनेको नाटकमा भूमिका खेलेको हो, रियल हैन भन्ने नबुझ्ने को हुन्छन् र? तर पनि मानिसले कसैलाई कसरी आदर्श मानेर मनमा गढ्दो रहेछ , सीताको भूमिका गर्ने अभिनेत्रीले भोग्नु परेको थियो। पेट पाल्न गरेको कामलाई आदर्श मान्न थाल्यो भने त्यसले समाजमा नैतिक समस्या खडागरिदिन्छ भन्ने यो एक नमूना हो।
राजेश हमालप्रतिको अहिले देखिएको विरोध वा आक्रोशको कारण समता फाउण्डेशन र क्रिष्चियन एड नेपालको लगानीमा संचालित जातलाई उछालेर समाजमा बैमनश्यता थप्ने कार्यक्रम संचालन गर्यो भन्ने आरोप रहेको बुझिन्छ। जात, लगानी र प्रस्तोताको इमेज-￼￼यसमा विवाद उठ्यो।
जातको प्रश्न पराया परिभाषा वा ब्याख्या हो। हाम्रो सभ्य, सुब्यवस्थित, समृद्ध समाजलाई होडल्ने दुष्प्रयास हो। पहिचान छाड्न सकिन्न अर्थात जात त्याग्न सकिन्न। आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्ने कसरी? त्यसमा सोचिन्छ। म म हुनुमा नै गर्व छ। यसको सम्बर्धन प्रमूख कुरा हो र हुनुपर्छ।
भारतमा करिब २०० वर्ष ईसाइ बेलायतले शासन गरेको थियो तर त्यहॉ इसाईहरूको संख्या अहिले अल्पसंख्यक छ, २% पनि छैन। किन सबैलाई ईसाइ बनाउन सकेन? नेपालसंग लडाई लडेको अंग्रेजले नेपाललाई किन ईसाई देश बनाउन सकेन? भारतमा इस्लामले ६०० वर्ष शासन गरेको थियो तर किन अरू देशहरूलाई जसरी ईस्लाम मुलुक बनाउन सकेन? बुद्धिज्मले जरा गाडेको भनेको त्यसबेलाको भारत र नेपालमा बुद्ध धर्म किन अहिले लखेटिए जस्तो हुन पुग्यो? यी चिन्तनीय सवाल हुन्। सनातन हिन्दू धर्मको जग चट्टानमा छ। यो १० रेक्टरका हजारौँ भुकम्पमा पनि हल्लिएन र हल्लिने छैन। झन् झन् बलियो हुदैछ। कमजोर त बिदेशमा ईसाईहरू घट्दै गएर हुदैछन्। नेपालमा ईसाईकरणले पहाडी जनजाति र बौद्धमार्गीहरू विलाउदै गएका छन्। अहिलेसम्म हिन्दू समाजको छत्रछाया र दह्रो संरक्षणमा ढुक्कसंग रहन पाएकाले तिनको पहिचान र अस्तित्व आजसम्म कायम रहदै आएको हो। खतरा हिन्दुमा हैन, पहाडी जनजाती र दलित समुदायमा छ, तिनका आस्था, धर्म र पहिचानमा झन् खतरा बढ्दै छ। ￼
अनर्गल वादविवाद गरेर, आरोप प्रत्यारोप गरेर, कसैलाई दोष देखाएर, विगतलाई कोसेर, पहिलेका तत्कालको उत्तम समाज एवं अर्थ ब्यवस्थालाई धारे हात लगाएर वा बाहुनक्षेत्रीउपर फोहरी वचन बोलेर, विश्वका डेढ अर्ब हिन्दुहरूलाई होच्याएर समाधान हैन, समस्या झन् बल्झिने मात्र हुन्छ। समाजका सबै जातजाति, वर्गको सहयोगबिना समाजमा जरा गाडेको सयकडौँ वर्षदेखिका खराब रिति रिवाजमा कुनै सिन्को भॉच्न सकिदैन। त्यसका लागि समाजका चौतर्फी वर्ग र कथित उच्च जात र धार्मिक समुदायका अगुवाहरूको साथ उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। समाज सुधारका अभियान सडकमा थाल ठटाएर वा मिडियामा गफ हानेर कहिल्यै संभव हुदैन। फिल्डमा सबैको मन छुदै , मन जित्दै खट्नुपर्छ। जबरजस्ति हुने भएको भए जातीय लिंगीय विभेदबिरूद्ध सुरू गरिएको १०वर्षे जनयुद्धले भईसकेको हुने थियो, तर खोई त?
छुवाछुतबिरूद्धको कानुन बनेको अहिले ६० वर्ष पुगिसक्दा पनि आज हामी किन त्यही कुराको रटान गरिरहेका छौँ? हामी सबैले चिन्तन गर्नुपर्दैन? सवाल जातको हुदैहैन, विभेद को हो, पिछडिएका भूगोल र समाजको हो। छुवाछुत एक सामाजिक कुरिति हो। हामी घरपरिवारभित्र आपसमै पनि छुने नछुने परिस्थिति रहेको छ। व्रतबन्ध नगरेको, बिहे नगरेको ननुहाएकालाई छुन दिईन्न। यो पारिवारिक मामला हो। जुनसुकै जातका हुन् बाहिरियालाई घरभित्र छिर्न दिनु नदिनु निजी अधिकार हो।
त्यसैले उनले पनि बुझ्नुपर्ने हो, कुनै पनि साध्य सही भएर साधन सही भएन भने त्यसको विकृति झन चर्को हुन्छ, बुमेराङ हुन्छ। यो हाम्रो शास्त्रीय मान्यता हो। मेरो विनम्र सुझाव छ, अब राजेश हमाल त्यो विवादास्पद प्रायोजित धार्मिकता र जातीय सद्भावलाई विगार्नमा लक्षनिहित जस्तो कार्यक्रमबाट पछि हट्नु ठिक हुनेछ। सबै जनताको मनमा रहिरहने यो राम्रो विकल्प हो। उनको मानमा कुनै कमी नआओस्, मेरो त कामना मात्र हो।
चाहे अमिताभ बच्चन होस् वा नेपाली अमिताभ राजेश हमाल- ती कलाकार मात्र हुन्, अभिनयकर्ता हुन्, ती पैसा लिएर नै कार्यक्रम गर्छन्। तिनका जिविकोपार्जन गर्ने खेति अभिनय हो। तिनका नाटकमंचन वा अभिनयबाट दर्शकले भरपूर मनोरंजन लिने हो। त्यो भन्दा बढी महत्व दिएर पेशेवर कलाकारसंग आदर्शको अपेक्षा गर्नु तिनीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ।
कलाकारको रोजीरोटी दर्शक वा स्रोताको आकर्षण र मायाले चल्ने हो। जनताको माया पाउनु भन्दा त्यसलाई निरन्तर कायम राखिराख्नु सक्नु कठिन काम हुन्छ।
( उपाध्याय नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव हुन् )